Kuita bonhora muhukama hwekubiridzira kune mumwe wako here?
Kuchinja kune hukama hunochinjawo hutano
Kutaura nezvebonyora pamwechete
Nyaya yekuzvigutsikana mukati meukama ndeyechokwadi yemashoko anonyanya kuoma ehupombwe mune kubatana.
Tsanangudzo dzakasiyana dzekuita bonhora
Nepo panguva imwe chete iyo inowanzosarudzo yekugadzirisa zvepabonde, kune vakawanda vanoenda pasina kutaura kuti muhukama, imwe inogutsikana chete nemumwe wako.
Kuita Bonhora Muhukama Hwokunyengera kune Mudiwa kana Mudiwa?
Nokuti hausi vanhu vashomanana, inopesana nekubiridzira apo mumwe wake anozvigadzirisa pachake muhukama. Nyaya yacho inofanira kutarisana nekuzorora kwakanyanya.
Kune vanhu vakawanda, bonhora ndeyekukosha kwehupombwe hwavo. Haisi kungoshumira kuongorora muviri wako, pfungwa yakadzika yehupenyu hwakanaka mune zvepabonde, asi mune dzimwe nguva kungobudiswa kwechirevo chemuviri.
Mushure mezvose, zvakave zvesayenzi zvakaratidza kuti chirwere, kunyanya munguva dzinotambudza, chinogona kuva nesimba rakasimba rokuzorodza pamuviri nepfungwa. Kana usina kunge uine ukama kwenguva yakareba, iwe kazhinji wakashandisa kugutsikana kwenguva refu kuti uwane zororo uye mufaro.
Iko kuchinja kwehukama ikozvino kazhinji zvakananga kuite nekuchinja kwakasimba mukati mehupenyu hwepabonde
Kunyanya pakutanga kwehukama, vanhu vakawanda vane zvepabonde zvakawanda zvokuti kuzvidzora hakuchina kukosha uye kunotsiviwa zvachose nekushamwaridzana nemumwe wako. Asi izvozvo zvinogona kuchinja munguva yehukama.
Kana hupenyu hwezuva nezuva hunotanga uye huwandu hwepabonde huri kuderera, zvinenge zvichiita kuti mumwe wako asvike nenzira dzekuita bonhora zvakare. Zvikonzero zveizvi zvakasiyana chaizvo. Kune rumwe rutivi, panogona kuva nechido chikuru. Zvinetso zvinokonzera muhukama, kunyanya nemhaka yekudzvinyirira, ndezvakanaka. Kunyange zvakadaro, kune vanhu vakawanda, zvepabonde uye kugutsikana ndizvo zvinodiwa zvekukosha. Mubvunzo ndewokuti ungabata sei chinhu ichi semumwe wako.
Kuita bonhora pasinei neshamwari?
Kuita bonhora kunonyengedza kune mumwe wako here?
Dambudziko rega rega rehurukuro iyi nderekuti, sezvakawanda, hazvitauri nezvazvo. Kunyange zvazvo mumwe waanoita naye angafunga kuti bonhora ndeye nzira yakakwana yekugadzirisa kushungurudzika, rumwe rutivi rwebambirano ukunyengeri pahukama.
Mushure mezvose, zvinogona kuratidza kusava nekunakidza, kusava nekusava nekunyanyisa kune zvekuita zvepabonde pamwe chete, kana kungova chiratidzo chekusavhiringidzika mune zvehukama. Nokuti hazvisi kune munhu wese ndeyekuita bonhora kuita chiito chekushamiswa kwenguva pfupi.
Kwavari inoshamwaridzana nehukama hwepedyo uye hukama hwehukama hwepedyo hunofanira kugoverwa muhukama nemumwe wako. Panewo zvimwe zvakadai sekuona zvinonyadzisira, izvo zvinowanzoshandiswa pakuita bonhora uye kusimbisa manzwiro ekunyengera.
Sezvo kakawanda muukama, mhinduro yedambudziko rakadaro iri pakati - uye mukukurukurirana pakati pevamwe vashandi.
Kuita bonhora ndeyevanhu vazhinji vanowirirana uye chikamu chehupenyu hwehupenyu. Maererano neongororo kunyange vakaroorana vane zvakawanda zvepabonde vane chido che "kuisa maoko pavari".
Zvikonzero izvi, sezvataurwa pamusoro apa, zvakasiyana uye kazhinji hazvive nechokuita nekusagutsikana nemukomana kana hupenyu hwepabonde. Zvinongova zvakakosha kuti mumwe ataurirane nemumwe wake pamusoro pehurukuro uye anogadzirisa kusava nechokwadi chero kupi zvayo kunokonzerwa nemamiriro ezvinhu akadaro nokukurumidza.
Kuita bonhora hazvifaniri kuva dambudziko, nokuti vanhu vanozvigutsa vanowanzova nemafungiro akanaka emuviri zvakare. Izvi zvinobatsira hukama hwepabonde uye hunoita kuti huve nani zviri nani. Kana iwe uchitaura nemudiwa wako nezvenyaya iyi, unogona kuita danho rinokosha muukama hwako.